Mareykanka oo Iiraan oo ku cadaadineyso inay sii deyso Muwaadin Mareykan ah – SBC
Mareykanka oo Iiraan oo ku cadaadineyso inay sii deyso Muwaadin Mareykan ah
Warka soo baxay wadanka mareykanka ayaa lagu sheegay in dowlada Mareykanka ay ka dalbaneyso Dowlada Iiraan inay siideyso muwaadiin mareykan ah oo dhawaan lagu xukumay xukun dil ah ka dib markii iiraan ay ku eedeysa inuu xiriir la lahaa hayada sirdoonka Mareykanka.
Warka mareykanka waxaa lagu sheegay in muwaadinka Mareykanka ee Mirzaei Hekmati uu haysto dhalashooyinka Mareykanka iyo Iiraan waxaana lagu xukumay maalintii isniinta Dil ka dib markii la sheegay inuu xiriir la lahaa dal cadow ah.
Aqalka cad ee Mareykanka waxaa uu been abuur ku tilmaamay in Hekmati uu yahay basaas waxaana warka aqalka cad lagu sheegay in amuurtaasi ay dhalineyso fiiro gaar ah.
Mareykanka waxaa uu sheegay hadii xukunka Mr Hekmati uu run noqdo mid run ah ya dowlada mareykana dhaleyn doono isaga oo ku tilmaamay dowlada iiraan mid cadaalada ka fog islamarkaasina dadka Mareykanka ay qabtaan uga faaideysta arimo siyaadeed.
Mr. Mirzaei Hekmati waxaa oo da’adiisa ay tahay 28 sanno jir waxaa uu horey u soo noqday mid ka mid ah ciidamada badda ee wadanka mareykanka waxaana uu sidoo kale tababar ciidan ku soo qaatay wadamada Ciraaq iyo Afhganistaan ka hor intii aanu aadin wadanka iiraan oo lagu bishii hore.
Dowlada Iiraan Tv-geeda ayaa waxaa ka soo muuqday dhawaan Hekmati oo ku hadlaya luuqadaha Ingiriiska iyo Faris kuna qiraya inuu ka mid yahay sirdoonka mareykanka ee CIA waxaana uu sidoo kale qiray inuu ahaa basaas.
Xukunka dilka ee Muwaadinka mareykanka waxaa uu ku soo beegmayaa xilli dowladan iiraan iyo Dowladaha reer galbeedka uu xiriirkooda sii xumaanayo amuurta la xiriirta hubka Nuclearka ah.
Waasida aan larabno kuwa soomaalida ah ee gaalada u ololeeya ama culima hasheegteen oo dadka dimoqraadiyada ha ufatwoodeen ama caama ha ahaadeen waxa naga go.an xataa hadii alshabaab laga adkaado inaan dayn una eegin qabiil iyo qaraabo midna waan ku taageersanahay iiraan